တေးရေး သားနတ်သျှင်နောင် ရေးဖွဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်များသီဆိုထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်တော် စစ်… – PVTV Myanmar
တေးရေး သားနတ်သျှင်နောင် ရေးဖွဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်များသီဆိုထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်တော် စစ်…
တေးရေး သားနတ်သျှင်နောင် ရေးဖွဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်များသီဆိုထားတဲ့ ပြည်သူ့တပ်တော် စစ်ချီသီချင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 20K Share – 2719
Nwe Nwe Aye says:
2021-06-27 at 7:38 PM
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် PDF တွေကိုချစ်ပါတယ်
2021-06-27 at 7:57 PM
2021-06-27 at 8:08 PM
2021-06-27 at 8:19 PM
ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ PDF တပ္မေတာ္
Min Ye Aung says:
2021-06-27 at 8:24 PM
ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် PDF အတွက် အမြဲတမ်းလေးစား ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ကျန်းမာကြပါစေ၊ ဘေးကင်းကြပါစေ။ ပြည်သူ့မေတ္တာကြောင့် တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်နိုင်ပါစေ။
2021-06-27 at 8:31 PM
သီချင်းက. အားမာန် ဖြစ်စေ
Pmm Chit says:
2021-06-27 at 8:43 PM
ပြည်သူချစ်သောPDF တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်စေ…ပိုင်စေ…နိုင်စေ…
Ni Htwe says:
2021-06-27 at 8:55 PM
PDF စကစ ကိုအမြစ်ဖြုတ်
Nay Thurain IC says:
2021-06-27 at 9:11 PM
NUG /CRPH /PDF
“သံကိုပူတုန်းထုပါ ” တဲ့
ဇွန်မှာ သံကပူသေးပေမယ့် အနီရဲရဲမဟုတ်တော့ဘူး
အင်မတန်မှပဲဝမ်းနည်းစရာ ” တဲ့ ။
Time and revolution wait for no man နော်
David Oral Jones says:
2021-06-27 at 9:55 PM
PDF တိုင်းပြည်ရဲ့ သားကောင်းရတနာလေးတွေ ဘေးကင်းလို့ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
Nunu Si says:
2021-06-27 at 10:31 PM
အောင်ပွဲ တိုင်းမှာ အနိုင် ရ ပါစေ…
အရေး တော် ပုံ အောင်ရမည်…
2021-06-28 at 6:25 AM
K Kyaw Soe says:
2021-06-28 at 7:00 AM
2021-06-28 at 8:29 AM
ျပည္သူအခ်စ္ေတာ္ pdf ေလးေတြအရမ္းေတာ္တယ္အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္
La Wunn Cho says:
2021-06-28 at 7:31 PM
Ma Tin Myint says:
PDF. တွေ နှင့် အတူ ပြည်သူ့ တော်လှန်ရေး တွင်ပါဝင်သူအားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ 🙏🙏🙏
2021-06-28 at 11:12 PM
Nway Oo Thit Sar says:
2021-06-29 at 11:22 AM
🙏🙏🙏 အလိမ်အညာမပာုတ်ပါဘူး။ ညီမတို့မိသားစုအဆင်မပြေ အိမ်လခနေနေသာသာ ထမင်းစားဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ။တစ်နပ်စားလိုက်2ရက်3ရက်ငတ်လိုက်နဲ့😔 အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ wavemoney & kbzpay ထဲကအစွန်းထွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကျပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ 😔 လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လှူဒါန်းချင်တဲ့သူဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ် လိပ်စာ ဖုန်းဆက်မေးပေးပါ 🙏🙏🙏
2021-06-29 at 6:15 PM
စြယ္ ေတာ္ says:
2021-06-29 at 11:06 PM
ပြည်သူ့အချစတော် PDF သူရဲကောင်းတို့ဘေးကင်းပါစေ၊ကျန်းမာပါစေ။တိုက်ပွဲတိုင်းအထိအခိုက်မရှိအောင်ပွဲဆင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သနေပါတယ်။တရားသောစစ်နိုင်ကိုနိုင်ရမည်။
Lin Xtet Kyaw says:
2021-07-02 at 2:43 PM
Makhinmay Mghtanlu says:
2021-07-06 at 4:51 PM
သီချင်းလေး ကောင်းလိုက်တာ။ သီချင်းစပ်သူ၊ ဂီတ၊ သီဆိုသူများအားလုံး တော်လိုက်ကြတာ။ ပြည်သူချစ်တဲ့ KNU, KIA, PDF စစ်သည်များအားလုံး ဘေးရန်ကင်းကွာပြီး၊ အောင်ပွဲအလီလီရပါစေ။
ဒေါ်နီမြင့် ဒေါ်နီမြင့် says:
2021-07-14 at 1:07 AM
2021-07-14 at 1:10 AM
U Zaw Zawoo says:
2021-07-21 at 7:22 PM
မိုးစက် ပွင့် says:
2021-08-28 at 11:49 AM
ထာဝရ လေးစားပါတယ် ပြည်သူကမွေးပြည်သူ့ရဲ့အား PDF
Burma Associated Press (BAP) ၏ “နွေဦးမျှော်လင့်ချက်” အမည်ရ အက်ဆေးကို နွေဦးကိုကို…
နွေဦးတော်လှန်ရေးလမ်းခုလတ်တွင် ကျဆုံးခဲ့သော ဂီတအနုပညာရှင် “ရေမွန်” အတွက် သူငယ်ချင…